သင်တစ်ယောက်ယောက်ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်သေးရင် ဒါကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ In:Inspiration/Aspiration/Motivation, Kawi Inspires
ခွင့်လွှတ်ခြင်း ဆိုတာကို သင်တို့ဘယ်လို ခံယူထားပါသလဲ? ဒီမေးခွန်းကို မမေးခင် သင်ခွင့်လွှတ်ဖူးပါသလား? ဒါမှမဟုတ် သင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ ကြိုးစားဖူးပါသလား? လို့အရင်မေးရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ခွင့်လွှတ်ဖူးကြလား? ကျွန်တော်ကတော့ ခွင့်လွှတ်ဖူးတယ်… ချိန်းထားတာကို နောက်ကျပြီးရောက်လာတဲ့သူငယ်ချင်း၊ မျက်နှာများတဲ့ချစ်သူ၊ နောက်အိမ်ထောင်နဲ့ ပျော်နေတဲ့ အဖေ စသဖြင့်ပေါ့။ တချို့ကို ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ် လိုက်တာက သူတို့တောင်းပန်လို့၊ တချို့ကိုကျတော့ သူတို့အပြစ်က သိပ်မကြီးလို့၊ တချို့လူတွေကျတော့ သူတို့တောင်မသိဘဲ ကျွန်တော့်ဘာသာကျွန်တော် ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့။ ဥပမာပြောရရင် – စပ်စုတာကို ကွျွန်တော်မုန်းပေမယ့် ခဏခဏ မေးမြန်းတတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကို ကျွန်တော် ပြန်ဖြေပေးနေရသလိုပေါ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီလူက ကျွန်တော့်အတွက်အရေးပါလို့ပါ။ တချို့လူတွေကိုကျတော့ ကျွန်တော့်ဘဝထဲမှာ ဆက်ရှိနေစေချင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်သူတို့ကို မမုန်းရက်တဲ့အတွက်ပေ့ါ၊ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း အဲဒီလူကို ကိုယ်ချင်းစာဖြစ်ရင် ဖြစ်စေ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အမုန်းတွေမသိ်မ်းထားချင်တော့ရင်ဖြစ်စေ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ? သေချာတာတစ်ခုကတော့ ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ခံစားခဲ့တာတွေကို မေ့ပစ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး၊ အမှန်တရားတွေကနေ ရှောင်ပြေးတာလည်း မဟုတ်သလို အရှုံးပေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဖက်လူကို အနို်င်ပေးလိုက်တာမျိုး မဟုတ်သလို ကိုယ် မနာကျင်ခဲ့ရဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ညာတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာတွေက… ၁။ အမုန်းတရားတွေကို လွှတ်ချလိုက်တယ်၊ မနာကျည်းတော့ဘူး။ ၂။ လက်တုန့်ပြန်ဖို့စွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ ၃။ ကိုယ့်ကို နာကျင်စေခဲ့တဲ့သူကို ပြန်နာကျင်ခံစားရတာမျိုး မမြင်ချင်တော့ဘူး။ ၄။ ကိုယ့် နာကျင်မှုတွေကို ထပ်ခါ တလဲလဲ ပြန်မတွေးတော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ၅။ လက်ရှိကာလကို အကောင်းဆုံးနေထိုင်တယ်၊ အတိတ်ကို ပြန်မစဉ်းစားတော့ဘူး။ ၆။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ် ငြိမ်းချမ်းမှု ပြန်ယူတယ်။ ၇။ အရာရာကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်လာတယ်။ ၈။ နာကျင်ခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုလုံးကို လျစ်လျူရှုနိုင်လာတယ်။ ၉။ ကိုယ် မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို ပြောင်းလဲဖို့မကြိုးစားတော့ဘူး။ ကို်ယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ပြင်လိုက်တယ်။ ၁၀။ ကိုယ့်ကိုနာကျင်စေခဲ့တဲ့အရာတွေအပေါ် အရင်ကလောက် လိုက်မခံစားတော့ဘူး။ ၁၁။ ဘာကိုမှမမျှော်လင့်တော့ဘူး။ စာကြောင်းတစ်ခုကို ကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့အချိန်မှာ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ကျွန်တော် ပိုနားလည်သွားပါတယ်။ ဘယ်သူတွေကို ခွင့်လွှတ်တယ်လို့ ကျွန်တော် တောက်လျှောက်ရေးခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ “ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာ အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးမှ အဲဒီအကျဉ်းသားက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေခဲ့မှန်းသိလာရတာပါ” တဲ့။ ကျွန်တော်ကို်ယ်တိုင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့ခက်ခဲနေတုန်းပါ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်လာလေလေ ကျွန်တော် ပိုလွတ်လပ်လာလေလေပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့အတွက်ရော ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုများလဲ? တကယ်ရော ခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလား? -Remy “To forgive is to setaprisoner free and discover that the prisoner was you.” – Lewis B. Smedes – ...